Ungaite sei kuteedzera ako ekudyara? | Ehupfumi Zvemari
Ungaite sei kuteedzera ako ekudyara?
Kutengwa uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya ndeimwe yedzimwe nzira dzakasarudzika dzevatengesi veSpanish kuti kuchengetedza kwavo kubatsire. Pamusoro pezvimwe zvigadzirwa zvemari kana kunyangwe kubva pamari yakatarwa. Nekudaro, zvichave zvakakosha kwazvo kuti iwe unyatsoongorora nzvimbo dzako nechinangwa chikuru che buda mumisika panguva yakakodzera uye unakirwe nemari inogona kuwanikwa inowanikwa nekufamba kwako mumisika yemari.
Kubva pane ino mamiriro achaunzwa kwauri nguva dzese, unogona kusarudza kubva pane dzakasiyana siyana nzira dzinodzidzisa kuziva chimiro chako investments. Iko zvinoenderana nezvinodiwa zvako, iwe unozokwanisa kuwana iyo nyowani tekinoroji masevhisi ayo emari masangano anokupa iwe kune yakaringana manejimendi yako wega zvinhu. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kutevera kushanduka kwemari yako kubva chero kupi. Kumahombekombe emahombekombe kana kunzvimbo yekure kure panguva yako yezororo.
Chero zvazvingaitika, nzira inoshanda kwazvo ichiri iyo banking pamusoro mutsetse izvo zvinokupa iwe ruzivo munguva chaiyo pamitengo yese yezvivimbiso uye makuru epasi maindekisi. Iyo iruzivo iyo iwe yaunogona kukumbira chero nguva uye mahara. Kwete pasina izvo zvinokushandira iwe kune akawanda marudzi ekuvhiya. Semuenzaniso, shandura mashandiro anoenderana nedhata nyowani, ita yakazara kana zvishoma kutengesa, shandisa yekurasikirwa muganho odha kana rega kurasikirwa kana kungovhara zvigaro pamusika wemasheya panguva dzinotyisa.
1 Zvimwe zvetsika zvinotevera
2 Nyorera iwo matsva tekinoroji
3 Stock ruzivo masuo
4 Investment panguva yezororo
5 Bank yekuzivisa masevhisi
6 Gadzira yako wega magiraidhi
Zvimwe zvetsika zvinotevera
Ehe unogona kushandisa akajairwa masisitimu. Iwo akashandiswa nevabereki vako kana sekuru nasekuru makore apfuura. Hazvimbokundikani Uye ivo vanogona kuve vachinyatsoita zvinobudirira kubva kune chero mhando nzira yekudyara. Mupfungwa iyi, kana iwe usina mukana wekubhengi online, mhinduro yedambudziko iri ichave yekugara uchienda kunhepfenyuro, kunyanya iwo akasarudzika. Iwe uchagara uine mupiro unokosha wemapepanhau anopa ruzivo pamutengo wekuchengetedzeka kwemari. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mune dzakawanda zviitiko zvinogumira kumakambani akanyorwa pane Ibex 35.
Nekudaro, haazi ese zvipo zveiyi nzira zvichave zvakanakira. Sezvo iwe uchange uine miganho yakakomba mukutevera iyo inogona pane imwe nguva kana imwe inokuvadza zvaunofarira. Semuenzaniso, ivo vanongokupa iwe ruzivo kwenguva pfupi kwazvo-kwenguva. Kwete zvenguva refu, sezvingatarisirwa kwauri. Kunyangwe dambudziko hombe richizouya nekushaya chaiyo-nguva ruzivo. Kana zvisiri, pane kudaro, inononoka uye nemaminetsi mashoma kunonoka. Izvi mumisika yemari zvinogona kureva maeuro mazhinji mumabasa anoitwa.
Nyorera iwo matsva tekinoroji
Kune rimwe divi, imwe yemhinduro dzinobudirira dzinowanikwa nevashambadziri vadiki nepakati ndeiyo inopihwa nharembozha kuburikidza nekubatana kune chiteshi chinopa sevhisi iyi. Kusvikira iyo inobvumidza chaiyo-nguva mashandiro pane chikuru misika yemari kutenderera pasirese. Kunyangwe mune akanyanya kure kure kubva kuSpain uye ayo kusvika makore mashoma apfuura zvainetsa kuwana. Uye zvakare, kuburikidza neshumiro iyi iwe unogona zvakare kushandisa maturusi ayo achizokubatsira iwe kuita yako wega Investment sarudzo.
Uine bhenefiti yakawedzerwa yaunokwanisa kushandisa nekutevera mari dzako chero nguva. Kubva kumba kwako, kubasa kana kunyangwe kuhofisi yachiremba wemazino. Pachave pasina paripo miganhu yekuti iwe ushandise ino yazvino ruzivo system. Nechinodikanwa chega chekuti iwe unofanirwa kuve uine nhare yakashongedzerwa kuita iyi mhando yemabasa muhomwe. Iko kwaunozove neruzivo nezve ako ma investments Pakarepo uye pasina chero kunonoka mukuita uye masevhisi anodikanwa kubva kunhare yako.
Stock ruzivo masuo
Imwe yedzimwe nzira dzaunenge uine zvimwe paruoko ndeichi. Iwe haugone kukanganwa kuti ruzhinji rwemusika wemasheya uye hupfumi ruzivo maseru zvinopa mukana uyu. Mune izvo zvavanoratidzira neese kunyatsojeka iyo kondirakiti vhoriyamu, mashoma uye ma maximums echikamu chega chega chekutengeserana, pakati pemamwe ma parameter auchazoda ruzivo pane imwe nguva kana imwe. Iwe une mukana wekuti muzviitiko zvakawanda haufanire kunyoreswa kuti uwane chero eaya masevhisi. Uye zvakare, chishandiso chakanakisa kushambadzira mashandisirwo emari yekutsinhana pane imwe nguva.
Hazvishamisi kuti inyanzvi inonyanya kukodzera kune vanhu vari kazhinji kure nemisha yavo, mahofisi kana nzvimbo dzekushandira. Iko iko kuri kwekutanga kukasira kuziva icho chaicho mamiriro eportfolio yako iri. Zvekuti nenzira iyi, iwe unogona kunyange kusiyanisa nzira yekudyara kana zvichidikanwa. Iko mashoma masekondi ekunonoka mukuita anogona kufungidzira maeuro mazhinji emusiyano. Naizvozvo, zvakakodzera kushandisa kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti zvinokubatsira kuti ubude mumatambudziko asinganzwisisike panguva dzausingade.
Investment panguva yezororo
Rimwe dambudziko rinogona kuoneka panguva yezororo. Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe wakazvionera uye hauna kuziva zvekuita mune imwe inonyadzisa mamiriro ako emari zvido. Kunyangwe ye dzivisa mhedzisiro isingadiwe zano rakanakisa nderekusiya yako account yekuchengetedzeka muhuwandu hwemari. Ndokunge, kubvisa nzvimbo dzekutenga kuti utange maitiro ekutenga kana vachinge vasvika kubva parwendo.
Zvakare zvine zvirevo odha zvinokutendera iwe kuti upinze mamiriro ane njodzi. Iwo ari nyore kwazvo kushandisa uye anotendera mushandisi kushandisa mazuva mashoma nerunyararo ruzere rwepfungwa kwavanoenda. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti zvinozoiswa kana mutengo wekutengesa zvikamu ukasvikwa. Kazhinji hunyanzvi hwekubuda mune aya mamiriro mushe hwakavakirwa pa chibatanidze nematanho ekudzivirira. Hazvishamisi kuti iri imwe nzira inonyanya kurayirwa yezororo. Nezvakanakira kuti iwe unenge usina makomisheni kana ekuwedzeredza chero nguva kubva kune yako yemari institution. Kana zvisiri, pane kudaro, richava remahara sevhisi mune dzakawanda zviitiko.
Bank yekuzivisa masevhisi
Ehezve, imwe sosi isingambokundikana mune idzi dzakasarudzika zviitiko ndeye iyo inouya kubva kuyevero kubhangi uko iwe wakabata chibvumirano chako chechengetedzo. Chiridzwa chinokutendera kuti uchenjere chero kufamba kukuru mumisika yemari. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mukana wekutengesa ako masheya kana zvirinani kusiyanisa zano uye kuyedza kusimudzira kudzoka pane zviwanikwa. Unogona kugashira ichi chiziviso chero nguva uye maawa ese ezuva pakombuta yako wega, nharembozha kana piritsi. Zvichida kuburikidza nebhangi raunoshanda naro nguva dzose kuitira kuti sevhisi ive yemahara uye haufanire kushandisa imwe euro.
Kune rimwe divi, iri kirasi yambiro inoratidzwa pamberi pekufamba mumisika yehukuru hwakasimba, ingangoita yakasarudzika. Kwete pasina, ivo vanokutendera iwe ita mumaminetsi mashoma. Kupindura kwako kuchakuchengetedza kubva kumatambudziko mazhinji kubva zvino zvichienda mberi. Beyond yezano rauri kushandisa mune ako ekudyara. Ehezve, iwe hauzozvidemba kana iwe ukasarudza iyi yekudzivirira modhi mune zvaunofarira semudiki uye wepakati investor. Nekuti izvo zvinotokutendera iwe kudzora kurasikirwa, kana paine chero pane imwe nguva.
Gadzira yako wega magiraidhi
Kuitwa kwechirongwa chekutanga ichi kunogona kubatsira zvakanyanya kana iwe uchizoshanda neimwe frequency mumisika yemari. Kubudikidza nekomputa yako wega uye chirongwa chezvemari unogona kugadzira chishandiso chine hunhu uhu. Kubva kwaunogona gadzira iyo mifananidzo izvo zvinonyanya kubatsira kune ako investments. Zvichienderana nezinga rekudzidza raunopa. Nekuti izvo zvazviri ndezvekuti iwe unoziva kuibata nenzira kwayo kusarudza kwako mashandiro mumusika wemasheya.
Ichi chishandiso chitsva chinopa iwo marongero ekubuda nekupinda mumisika yezvemari panguva yakakodzera. Kwete pasina, izvo zvinopesana uye zvinotsigirwa zvekuchengetedzwa, zvikamu uye indices yemasheya zvinoratidzwa. Uine achigadziriswa kubva zvakafanana. Ichi ndicho chimwe chezvakanakira pamusoro pezvimwe zvakajairika ruzivo zviridzwa. Kusvika pakuti iwe unozokwanisa kusimudzira rutsigiro rwehunyanzvi rwunogona kuita mashandiro ese auri kuzoita kuti abatsire kubva panguva dzino chaidzo.
Iwe unogona kuve uine dambudziko pakutanga kuti ubate iyi sosi yekutsigirwa kwekudyara. Asi zvishoma nezvishoma iwe unowana iyo inodiwa kudzidza kuitira kuti iwe ugone kuvandudza chero rudzi rwekuita. Kwete chete mumusika wemasheya, asi muhuwandu hwakawanda hwemari yemari. Semuenzaniso, mbishi, simbi dzakakosha, mari kana kunyange zvisungo zvekutonga kana ichi chiri chishuwo chako. Neye mupiro wekuvimbika kunoshamisa mune rese data iro raunopihwa ino ino ongororo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ungaite sei kuteedzera ako ekudyara?
Mari yakavimbiswa iri yakanaka zano rekudyara?
Zvikwereti zvekudyara uye zvinodzivirira zvinotyisa mashandiro pamusika wemasheya